Sheekadii labada nin bukaanka ahaa | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Sheekadii labada nin bukaanka ahaa
Sheekadii labada nin bukaanka ahaa
Sunday, March 25, 2018 Bulshada
Bulsha:- Laba bukaan oo madaxa ka xanuunsanaa ayaa Cusbitaal ku wada jiray. Maalin iyagoo lugeynaya ayaa mid si kedis ah ugu dhacay Berkada dabaasha, wuu quusay, salka u dambeysa ayuuna fariistay. Ninki kale ayaa u booday Berkada soona badbaadiyay.
Agaasimihi Cusbitaalka ayaa maqlay ficilka geesinimada ah ee ninkan sameeyay. Wuxuu amray in Cusbitaalka laga saaro maadaama hada loo tixgeliyay inuu caafimaad qabo.
Marki Agaasimihi loo keenay ninki ayuu ku yiri, “Waxaan kuu haynaa war fiican iyo war xun! Warka fiican waa in Cusbitaalka lagaa saarayo sababtoo ah hada waa kaa baxday, waxaadna noqotay Halyey qof badbaadiyay. Warka xun waxa weeye bukaanki aad badbaadisay wuxuu isku dal-dalay qolka wuuna dhintay”
Ninki ayaa ugu jawaabay, “Ditoore, Isag isma daldalin. Anigaa marki aan ka so saaray Berkada soo suray xariga kor ku xirnaa si uu qoyaankii uga qalalo!!! Xigasho xarbi